साहसिक खेल, साहसिक लगानी
डोनाल्ड ट्रम्पलाई डब्लुएचओ प्रमुखको जवाफ, “भाइरसमाथि राजनीति नगर”
बन्दाबन्दीमा विभागीय टोलीका खेलाडीः कोही कोठामै व्यायाम गर्दै, कोही ड्यूटीमा
बाआमासँग कुराकानी गरौं, व्यस्त राखौं !
'महिलामैत्री' राहत प्याकेजमा अण्डा र स्यानिटरी प्याड पनि
अवैतनिक दूतहरूकाे झण्डा र गाडीकाे सुविधा स्थगित
प्रजाबाट नागरिक बनेको त्यो २६ चैत
दोलखामा जथाभावी राहत वितरणमा रोक
ह्यान्ड स्यानिटाइजरमा विषाक्त रसायन भेटियो, बिक्री र प्रयोग रोक्न विभागको निर्देशन
अपडेटः बुधबार, २६ चैत २०७६ । ११:०० बजे राति | स्रोत : worldometers.info/coronavirus
खेलकुद शुक्रबार, फागुन ९, २०७६
भोटेकोशीमा बञ्जी गर्दै । तस्वीरहरु: विष्णुकान्त घिमिरे
सन् १९७५ मा अमेरिकी माइक एगरले त्रिशूली नदीबाट र्‍याफ्टिङ व्यवसाय नेपाल भित्र्याए । अहिले जलविद्युत् आयोजना र नदी दोहनले चपेटामा परे पनि र्‍याफ्टिङप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । त्रिशूलीपछि कर्णाली र भोटेकोशीमा पनि व्यावसायिक र्‍याफ्टिङ शुरू भएको छ ।
सन् १९९६ मा बीरु बमजन र बेलायती एडम हिलले पोखरामा पाराग्लाइडिङ भित्र्याए । न्यूजिल्याण्डका डेबिड एलडाइस र विष्णु न्यौपानेले भोटेकोशीमा बञ्जी शुरू गरेको पनि दुई दशक भइसकेको छ ।
भोटेकोशीमा र्‍याफ्टिङ ।
र्‍याफ्टिङ, पाराग्लाइडिङ र बञ्जीले नेपालीमा बढाएको ‘एड्भेन्चर क्रेज’ मा अहिले क्यानोनिङ पनि थपिएको छ । डोरीमा झुन्डिएर झरनाको फोहोरासँग खेल्दै झर्ने खेल हो, क्यानोनिङ । अहिले सिन्धुपाल्चोकको पाङलाङ खोला, चितवनको जलबिरे झरना र कास्कीको ल्वाङ घलेलमा व्यावसायिक रूपमा क्यानोनिङ गराइन्छ । बझाङको थलारा गाउँपालिका र तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ को इलुङ झरनामा पनि क्यानोनिङ शुरू हुँदैछ ।
पर्वत र बागलुङ अग्ला झोलुङ्गे पुल भएका जिल्ला भनेर चिनिन्छन् । सीमा भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीले पर्वतको कुश्मा र बागलुङको बलेवा बीचमा गहिरो खोंच बनाएको छ । यही ठाउँमा बनेको कालीगण्डकीको झोलुङ्गे पुलबाट अब बञ्जी हान्न पाइने भएको छ ।
पोखरामा बन्दै गरेको बञ्जी ।
यो बञ्जी विश्वकै दोस्रो अग्लो हुनेछ । खोलादेखि पुलको उँचाइ २२८ मिटर अर्थात् ७४८ फिट छ । परीक्षण समेत भइसकेको यो बञ्जीको लागत रु.२० करोड रहेको निर्माणकर्ता द क्लिफ प्रालिका अध्यक्ष राजु कार्की बताउँछन् । हाल विश्वकै अग्लो बञ्जी मकाउमा ७६४ फिट अग्लो छ । यो बञ्जी भने स्विट्जरल्याण्डको भरजस्का बाँधस्थित विश्वकै दोस्रो अग्लो ७२० फिट उँचाइको बञ्जीभन्दा अग्लो हुनेछ ।
पोखरामा पनि नयाँ बञ्जी बन्दैछ । यो बञ्जी नेपाल एड्भेन्चर्स प्रालिले पोखरा–१७, रातोपैरामा रु.८ करोडमा निर्माण गरिरहेको अध्यक्ष सन्तोष भट्टराई बताउँछन् । सेतीको खोंचमा बनिरहेको बञ्जीको दुई वटा प्लेटफर्म छन् । साधारण बञ्जी १२१ मिटर र साइकल जम्प, बकेट जम्प लगायत विशेष जम्प १२५ मिटर अग्लो प्लेटफर्मबाट गराइने भट्टराई बताउँछन् ।
पर्वत, कुश्माको पुलमा बञ्जी शुरु हुँदैछ ।
‘एड्भेन्चर’ मन पराउनेका लागि क्यानोपी जिपलाइन पनि धमाधम बन्दैछन् । चोभारको मञ्जुश्री पार्कमा वानहर्न एड्भेन्चर्स प्रालिले बनाइरहेको जिपलाइन तीन चरणको हुनेछ । जिपलाइनको पहिलो चरण १०० मिटर, दोस्रो १७० मिटर र तेस्रो ११० मिटरको हुनेछ ।
बनेपाको गौतम भिलेज रिसोर्टले पनि यही वर्षबाट क्यानोपी जिपलाइन शुरू गर्दैछ । कंक्रिट टावर बनाई रिसोर्टको छतमा जोडेर तीन चरणको जिपलाइन बनाइएको छ । प्रदर्शनीका लागि २५ मिटरको जिपलाइन पनि छ, जहाँ सुरक्षा सावधानी सिकाइन्छ । त्यसपछि पहिलो चरण ११०, दोस्रो ९५ र तेस्रो ९० मिटरको हुने रिसोर्ट संचालक विश्व बजगाईं बताउँछन् ।
ऐतिहासिक मकवानपुर गढीमा पनि जिपलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यहाँ गढी भ्यू रिसोर्ट प्रालिले जिपलाइन र स्वीमिङ पुलसहितको सुविधाजनक रिसोर्ट बनाइरहेको छ । जिपलाइनमा ‘टेस्ट फ्लाइट’ भइरहेको संचालक गोविन्द घिमिरे बताउँछन् ।
मकवानपुर गढीको निर्माणाधीन जिपलाइन ।
पूर्वको भेडेटारमा पनि वर्ल्ड वाइड एड्भेन्चर ग्रुपले ६५० मिटर लामो जिपलाइन संचालन गर्दैछ । दुई वटा रुट बनाइएको जिपलाइन फागुनभित्रै संचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको संचालक केदार थापा बताउँछन् । उक्त जिपलाइन भेडेटारको थुम्काबाट शुरू भएर देवीस्थानसम्म पुग्नेछ । त्यस्तै वर्ल्ड वाइड ग्रुपकै समन्वयमा भक्तपुरको घ्याम्पे डाँडामा योयो ग्रुपले ११०० मिटर लामो जिपलाइन बनाउँदैछ ।
व्यापारिक घराना गोल्छा समूहको हाइ ग्राउण्ड एड्भेन्चर प्रालिले पोखरामा जिप फ्लायर र बञ्जी शुरू गरेको एक दशक भइसकेको छ । कम्पनीले क्याटपुल, हाइ रोप कोर्स, स्विङ जस्ता खेल पनि केही महीनाभित्रै शुरू गर्ने चिफ अपरेटिङ अफिसर दिनेश महर्जन बताउँछन् ।
विहीबार, चैत २७, २०७६ डोनाल्ड ट्रम्पलाई डब्लुएचओ प्रमुखको जवाफ, “भाइरसमाथि राजनीति नगर”
विहीबार, चैत २७, २०७६ बन्दाबन्दीमा विभागीय टोलीका खेलाडीः कोही कोठामै व्यायाम गर्दै, कोही ड्यूटीमा
बुधबार, चैत २६, २०७६ बाआमासँग कुराकानी गरौं, व्यस्त राखौं !
बुधबार, चैत २६, २०७६ 'महिलामैत्री' राहत प्याकेजमा अण्डा र स्यानिटरी प्याड पनि